बेष्ट चिकित्सक कसरी बन्ने ? « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
बेष्ट चिकित्सक कसरी बन्ने ?
प्रा.डा.भगवानबाट सिक्नुपर्ने पाठ
२०७६, ६ मंसिर शुक्रबार १०:५६ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । प्रा.डा. भगवान कोइरालाले कार्डियाक सर्जन भएर सेवा शुरु गरेको २४ वर्ष बितिसकेको छ । उहाँले सन् १९९५ बाट कार्डियाक सर्जरी सेवा शुरु गर्नुभएको थियो । त्यो बेला त्रि.बि.शिक्षण अस्पतालमा वरिष्ठ कार्डियोथोरासिक सर्जन प्रा.डा. गोविन्द शर्माको नेतृत्वमा काम शुरु गर्नुभयो । पछि डा. कोइराला आफैंले ओपन हार्ट सर्जरीको नेतृत्व लिनुभयो । सन् १९८९ तिर जुनियर मेम्मर हाउस अफिसरका रुपमा काम शुरु गर्नुभएका प्रा.डा. कोइरालाले सर्जरी अध्ययन गरेर आएपछि जुनियर टिम मेम्मरका रुपमा काम गर्नुभएको थियो । शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा होस् वा मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा कार्डियाक सर्जरीको टिम लिडर भएर काम गरेको पनि धेरै भइसकेको छ । प्रा.डा. कोइराला भन्नुहुन्छ—‘सिधै मृत्युको मुखमा पुगेका धेरै बिरामीहरु बाँच्न सफल भएका छन् । म र मेरो सुपरभिजनमा अहिलेसम्म १५ हजार भन्दा बढीले शल्यक्रिया सेवा प्राप्त गरिसकेका छन् । लाखौंले बहिरंग सेवा प्राप्त गरेका छन् ।’ ‘दक्ष, सिनियर र बेष्ट चिकित्सक बन्न आफ्नो पेशामा ठूलो त्याग र तपस्या गर्नुपर्छ ।’ प्रा.डा. कोइराला भन्नुहुन्छ—‘चिकित्सा शिक्षामा निरन्तर अपग्रेड हुँदै जानुपर्छ । सुदृढ, सक्षम र समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्नुपर्छ ।’
टिम वर्क रिलायबल नभएमा जतिसुकै कम्पलेक्स शल्यक्रिया गरेपनि बिरामीहरु खतरामा रहन्छन् । प्रा.डा. कोइराला भन्नुहुन्छ—‘उपचारमा हुनसक्ने सम्भावित खतरा र उपचारमा सफलता प्राप्त गर्न टिममा बसेर एक आपसमा छलफल गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा प्रोटोकल बेसमा उपचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’
बिरामीको आवश्यकता र स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाको क्षमताको आधारमा बिरामी रेफर गर्नुपर्छ । बिरामीको उत्कष्ठ उपचार हुने ठाउँ पहिचान गरेर राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले तोकेबमोजिमको अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रोफेसनल निर्णयको आधारमा मात्र रेफरल सिस्टम शुरु गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय उपचारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रा.डा. कोइरालाको भनाइ छ ।
‘पहिला म रातिको समयमा बिरामीको अवस्थाबारे अस्पतालमा अनुगमन गथेँं । लोकल ब्याकअप भरपर्दो र सन्तोषजनक नभइसकेको अवस्थामा आफूहरु नै धेरै खट्नुपर्दथ्यो । टिचिङको ओपन हार्ट सर्जरी शुरु गर्ने ताका त म आइसियूमा नै सुत्थेँ । आइसियूभित्र खाना मगाएर खान्थेँ । गंगालालमा त्यति गर्नुुपरेन । तर रातीको समयमा राउन्डिङ गर्दथेँ ।—प्रा.डा. कोइराला भन्नुहुन्छ—‘त्यो बेला प्रशासनिक जिम्मेवारी पनि थियो । तर दिन बित्दै जाँदा टिवर्कको विकास भयो । आईसियूमा बस्ने जिम्मेवार चिकित्सकहरु विकास भएका छन् । रातिको समयमा सेवा दिने चिकित्सकको पनि अभाव छैन । सिस्टम र टिम बिल्डिङ भनेको पनि यही हो । आफूले मात्र सधै सेक्रिफाइज गरेर देश बन्ने होइन । आफ्नो अनुपस्थितिमा काममा अवरोध आउन नदिन र सुरक्षित तवरले काम सम्पन्न गराउन सिस्टम बनाउनुपर्छ । यसका लागि शुरुका दिनहरुमा निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ ।’
कोरोना माहामारीका बेला फ्रन्टलाइनमा खटिने महिला चिकित्सकको भोगाइ
जनस्वास्थ्य सरकार, काठमाडौँ । विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाभाइरस महामारीले भयावह परिस्थिति सिर्जना गरेको हुँदा अस्पतालमा आएका
महँगो भएता पनि प्राईभेट अस्पताल नै किन रोज्छन् सबैजना ?
नेपाल सरकारले उपयुक्त तथा पर्याप्त श्रोत साधनको व्यवस्था नगर्नु, व्यवस्थित नीति नियम नल्याउनु र फितलो
कस्तो अवस्थामा पिसिआर गर्ने ? पिसिआर गर्दाको फाइदा
ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा, अरु बेला भन्दा फरक वा बढी वा जिउ दुख्ने वा जिउ
नेपाल रेड्क्रस सोसाइटीको केन्द्रीय समिति विघटन र गैरसरकारी संस्थाहरुको भविष्य
रेडक्रस विश्वमै सबैभन्दा ठूलो गैरसरकारी सामाजिक संस्था हो । यसको मूल उद्देश्य नै विना
कोभिड-१९ संक्रमणले फोक्सोमा दीर्घकालीन असर देखियो-अध्ययन
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । कोरोनाभाइरस संक्रमणले फोक्सोमा दीर्घकालिन असर पार्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
फाइजर र बायोएनटेकद्वारा युरोपेली युनियन समक्ष खोप प्रयोगका लागि अनुमति माँग
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । जर्मन बायोएनटेक औषधि निर्माता कम्पनी र यसको अमेरिकी साझेदार फाइजरले आफूले
कोरोनाका बेला स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलन तताउँदै !
जनस्वास्थ्य सरोकार । सरकारले स्वास्थ्यकर्मीका माग सम्बोधन गर्न तत्पर नदेखाएको भन्दै स्वास्थ्य सम्वद्ध संगठनहरु आन्दोलनमा
३४ प्रतिशत एचआइभी संक्रमित खै ?
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । मुलुकमा करिव ३४ प्रतिशत एचआइभी एड्स संक्रमितको पहिचान हुन सकेको छैन
सन्देश श्रेष्ठ/ जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । कोभिड–१९ महामारीका कारण क्लिनिकल तथा नन् क्लिनिकल स्वास्थ्य तालिम